PALAUNG NATIONAL SOCIETY - JAPAN: မြန်မာစစ်တပ်မှ အပစ်မဲ့အရပ်သား သတ်ဖြတ်ခံရမှု
နိုင်ငံတကာသတင်းစာမျက်နှာမှ မြန်မာအစိုးရစစ်တပ်၏ ရက်...
မြန်မာစစ်တပ်မှ အပစ်မဲ့အရပ်သား သတ်ဖြတ်ခံရမှု
ဓါးကိုင်ပြီး ခြိမ်းခြောက်မှုတွေ လုပ်ပြီး ညှင်းပန်း...
မြန်မာ့နည်း မြန်မာ့ဟန် ငြိမ်းချမ်းရေး (၂)
၂၇၊ ၅၊ ၂၀၁၇ (စနေန့) မှာ မိုင်းခေါင်ကျေးရွာ Maihkawng RC camp စစ်ပြေးဒုက္ခသည်စခန်း မှ (၁) ကိုမရန်ဘရန်ဆိုင်း အသက် -၂၂ နှစ် (၂) ကို အင်ခွမ်ဂမ်အောင် အသက်-၃၁ နှစ် (၃) ကို လဗျနော်ခွမ် အသက်-၂၇ နှစ် တို့သည် မိုင်းခေါင်ရွာမှ ၃ မိုင်ခန့် ဝေးသော ခါ့ပရာရန် ရွာ ဘက်သို့ နွားလည်းနှင့် ထင်းသယ်ရန် သွားသောအခါ (ခ လ ရ- ၃၁၉) မှ ရဲဘော်မှာ တောထဲသို့ ဖမ်းစီးခေါ်ဆောင်သွားသည် ကို မိုင်းခေါင်စစ်ပြေးဒုက္ခသည်အချို့တွေ့ ကာစခန်း တာဝန်ခံအားသွားပြောသည်။ စခန်းတာဝန်ခံမှ (ခ လ ရ - ၃၁၉) တပ်ရင်းမှူးအားသွားရောက်မေးသောအခါ သူမသိကြောင်းပြောသည်။ စခန်းတာဝန်ခံနှင့် ၄င်းတို့၏မိသားစုများ ဒုက္ခသည်များ မနေ့က နေကုန်လိုက်ရှာသည်၊ ယနေ့ (၂၈၊ ၅၊ ၂၀၁၇) ရက်နံနက်စောစော ကတည်းမလည်းလိုက်ရှာကြသည်။ ယနေ့ နံနက် (၂၈၊ ၅၊ ၂၀၁၇) နေ့လည် အချိန် စခန်းမှ (၃) မိုင်ခန့်အကွာ တွင် တောထဲတနေရာ၌ မြေကြီးဖို့ထားသော မြေကြီး ကိုပြန်တူးသောအခါ ၄င်းတို့ အလောင်း (၃) လောင်း ကိုတွေ့ရသည် ဟု မိုင်းခေါင် RC camp မှပြောကြားကြောင်းသိရသည် ။
27.5.2027 (bat-6) ya shani Maihkawng RC camp Man Je Muklum na
1. Nhkum Gam Awng (asak 31 ning),
2. Maran Brang Seng (asak-22 ning),
3. Labya Naw Hkum (asak-27 ning) ni gaw Mai hkawng na deng (3) ram tsan ai Hka Pra Yang mare de nga leng hte hpun htaw sa wa ai shaloi HLY (ခ လ ရ-319) ni rim mat ai. Dai hpe Maihkawng IDP camp ni mu dat nna camp up hpe sa tsun ai . camp up mung
Tatyin mu (တပ်ရင်းမှူး )wa hpe camp up sa tsun yang shi nchye ai nga da lo. Camp up hte camp masha ni gaw mani mana mung tam daihpawt mung jau kaw na tam ai shaloi daini gaw ga gaput da ai dhara langai mu nna alai yu yang dai masha marai (3)amang hpe mu ai da.
Posted by PNSjapan at 7:56 PM